Degmada Dhahar oo u gudubtay wareegga saddexaad ee tartan cilmiyeedka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Degmada Dhahar oo u gudubtay wareegga saddexaad ee tartan cilmiyeedka
Degmada Dhahar oo u gudubtay wareegga saddexaad ee tartan cilmiyeedka
Habeenka 17-aad tartan cilmiyeedka warbaahinta Qaranka ee uu maamulka gobolka Benaadir taabagelinayo, waxaa ku tartamay degmooyinka X/weyne oo ka tirsan gobolka Benaadir iyo Dhahar oo ka tirsan gobolka Sanaag.
Tartamayaasha labada degmo qeybta hore waxaa la weydiiyey afar su’aal mid walba, iyadoo kadidb qeybta nasashada lagu soo gudbiyey warbixinnadii joogtada ahaa ee ka hadlayey taariikhda labada degmo ay dalka ku leeyihiin.
Degmada X/weyne ee gobolka Benaadir waxaa la weydiiyey toddoba su’aal, midna kama jawaabbin, hal su’aal ayeey si ka faa’ideysi ah uga jawaabbeen, waxa ayna heleen laba dhibcood (2 dhibcood).
Natiijada degmada Dhahar
Degmada Dhahar ee gobolka Sanaag, waxaa la weydiiyey toddoba su’aal waxa ay ka jawaabeen laba ka mid ah, shan waa ay qaldeen, sidoo kale laba su’aal ayeey si ka faa’ideysi ah uga jawaabbeen, waxa ayna uruursadeen siddeed dhibcood (8 dhibcood), degmada Dhahar ee gobolka Sanaag ayaa u gudubtay wareegga saddexaad ee tartan cilmiyeedka warbaahinta Qaranka.
Habeen dambe waxa uu tartan xiiso leh ka dhaxeyn doonaa degmooyinka Dharkeynley iyo Kaaraan oo ka wada tirsan gobolka Benaadir.
Previous article(Faallo) Xukuumadu weey ku shaqeyn kartaa miisaaniyad ku saleysan dakhliga gudaha
Next articleRa’iisul wasaare Kheyre oo Addis Ababa lagu soo dhoweeyey